arunsubedi: प्रचण्डको आशन्न भारत भ्रमण र राजनीतिक पर्यटन
नेपाल भारत सम्बन्धः 'लभ एण्ड हेट'
प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत भएर भारत गएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीजीको भारत भ्रमणको समयमा यो पंक्तिकार पनि आफ्नो कामविशेषले त्यहाँ पुगेको थियो । नयाँ दिल्ली क्षेत्रको हरियाणा फरिदावादस्थित होटलको लबीमा चिया गफ गर्दैगर्दा ती उद्यमीले मसँग सुरुमा माफी माग्दै राजनीतिक र कूटनीतिक प्रसंग निकाले । उनले गरेको प्रश्न र प्रश्नलाई पुष्टि गर्ने प्रसंग अलि लामै थियो । तर, एउटा नेपालीका लागि निकै पेचिलो र मननीय थियो ।
भर्खरैमात्र दुवै छिमेकीतर्फ आफ्ना दूतहरुलाई सप्ताहव्यापी राजनीतिक पर्यटनमा पठाएर यस क्रमको सुरुवात भइसकेको छ । हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्री यसरी लामो समय छिमेककोे तीर्थाटनमा गइरहने सामान्य प्रक्रियालाई हल्कारुपमै लिएको यस लेखकलाई एक भारतीय उद्यमीको प्रश्नले भने विचार गर्न बाध्य बनायो ।
हाम्रो व्यवसायिक प्रसंगबाट बाहिरिँदै उनले भने- ‘नेपाल-भारतबीच रहेका समस्या र त्यसबारे एक-अर्काको दृष्टिकोण दुवै मुलुकलाई पक्कै थाहा छ । त्यहाँ भारतका राजदूत लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि छन् । नमिलेका विषय तिनीहरूमार्फत नै आए पनि त हुन्छ । संवेदनशील विषयहरु भए सम्बन्धित विशेषज्ञको समूहमा बहस गराउन सकिन्छ होला । तीर्थाटनमा यत्रो लामो समय किन पाहुना लागेर बस्नु ? यसले तिम्रो राष्ट्रको गरिमा त फितलो हुन्छ नै, भारतीय सरकारी पक्षलाई पनि झमेला लाग्दो हो भनी तिमीहरु सोच्दैनौ ?’
कुरा गम्भीर थियो । ५/७ दिन नै दिल्ली बस्नुको अर्थ मलाई पनि खासै सुझेको थिएन । तर, भारतको नागरिक स्तरमा पनि यो विषयलाई यति गम्भीरतापूर्वक लिइएको हुँदोरहेछ भन्ने कुराको हेक्का मलाई पहिलो पटक भइरहेथ्यो ।
मेरा उद्यमी मित्र जसको क्लाइन्टका रुपमा म त्यहाँ उपस्थित थिएँ । उनले थप कुरा गरे – ‘तिमीहरुको यस्तो काइदाले तिमीहरुकै इज्जत घट्छ । पहिले त प्रतिक्रियात्मक भएर अरुसँग रिसाउनुभन्दा आफू अदवमा बस्नु जरुरी छ । पहिले इज्जत र अदवमा बस, सस्तो नबन । त्यसपछि स्वावलम्बी बन । बाध्यताको निर्भरता त एक-अर्काबीच सबैमा हुन्छ, यो ठूलो कुरा होइन ।’
एउटा व्यापारी काउण्टर पार्टबाट आएका यस्ता कुराबाट म अपमानित र लज्जित थिएँ । तर, आत्मतर्कना बाहेक मलाई अरु कुनै प्रतिक्रिया सुझेन ।
भारतीयहरुसँग हाम्रो अनौपचारिक सम्बन्ध छ । तीर्थ-व्रतका सम्बन्ध छन् । भारतीय समाज पनि केही अनौपचारिक छ । भारतीयहरुलाई हामी अलि हेप्छौं पनि । भारतको राज्य पक्षसँग प्रधानमन्त्री निवास अगाडि नै प्रदर्शन गरेर टक्कर लिँदा पनि हामी त्यसमा अन्यथा सोच्नुपर्ने मान्दैनौं ।
भाषिक समस्या जनस्तरसम्म पनि खासै छैन । त्यस्तो राष्ट्रको एउटा सामान्य व्यापारीलाई त हाम्रो नेतृत्वको हल्कापनले यस्तो भाव विकसित हुनसक्छ भने चिनियाँ जस्तो औपचारिक राज्य र समाजले हामीलाई के सोच्दो हो !
यो पंक्तिकार अझै पनि जोड दिन्छ – फगत राजनीतिक पर्यटनमा हाम्रा प्रधानमन्त्री छिमेक यात्रामा नजाऊन्
चीनमा पनि हाम्रा राज्यका अधिकारी र राजनीतिज्ञहरु हप्तौं बसिदिन्छन् । बिनसित्ति सपिङ कम्प्लेक्समा सुरक्षा प्रबन्धको झमेला सिर्जना गरिदिन्छन् । यो राजनीतिक पर्यटनमा अनावश्यक धाइरहने, आफ्नो इज्जत घटाउने र छिमेकीलाई झिंंजो लगाउने कूटनीतिक शैली नेपालले परिवर्तन गरेमा राष्ट्र, जनता र स्वयं राजनीतिक नेतृत्वको पनि इज्जत बढ्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
नेपाल भारत सम्बन्धः ‘लभ एण्ड हेट’
नेपाल-भारतबीचको ‘लभ एण्ड हेट’ सम्बन्ध लोककथ्यका आधारमा भन्ने हो भने हजार जिब्रो भएका शेष नागको पहुँचभन्दा पनि पर छ । तैपनि उठ्दा-बस्दा यस सम्बन्धका कारण हरेक नेपाली नागरिक कुनै न कुनै किसिमले प्रभावमा परिरहेका हुन्छन् । कथ्यमा समेट्न नसकिने त्यही प्रसंगलाई बारम्बार चर्चा गर्न हरेक नेपाली बाध्य छ ।
नेपालमा ६, ९, १२ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिइरहन्छन् । हरेक प्रधानमन्त्री कुनै न कुनै रुपमा भारत भ्रमण गर्न इच्छुक वा बाध्य के हुन्छन् कुन्नि ! सामान्यतया उसको पहिलो र यदाकदा दोस्रो गन्तव्य भारत नै हुने गर्छ । जे-जस्ता विषयमा पाखुरा सुर्के पनि भारतप्रति तुच्छ वचन प्रयोग गरेर आफूलाई सूरवीर ठान्नेको अवस्था पनि त्यो भन्दा फरक छैन ।
निकट अतीतको कुरा गर्ने हो भने भारत विरोधी राष्ट्रियता अघि बढाएको दोष पाएका केपी ओलीले पनि दक्षिणको भ्रमण गरेकै हुन् । अब वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि जाने तयारी हुँदैछ । पुष्पकमल दाहाललाई हरिद्वार, काशी दर्शनका लागि समय पक्कै चाहिँदैन, तर, पनि पहिलेका प्रधानमन्त्रीझैं उनले पनि ४/५ दिन बिताउने पक्का छ ।
श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने उखानझैं प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहाल पनि दुई छिमेकी राष्ट्रको राजनीतिक पर्यटनमा जाने पक्का छ । त्यसैका लागि आफ्ना दूत बनाएर दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई आ-आफ्नो इष्ट राष्ट्र जाऊ भनी प्रधानमन्त्रीबाटै पठाइएको कुरा चर्चामा छ ।
प्रधानमन्त्रीले दुवै राष्ट्रको भ्रमणमा नगई सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनुभएमा अत्यन्त उत्तम हुनेछ । यदि जाने नै भए पनि माथिको समय प्रसंगलाई ध्यान दिए वेश होला । यसै पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सांस्कृतिक र धार्मिक तीर्थाटन गर्नु छैन । घुम्न बाँकी पर्यटकीय ठाउँ बाँकी छैनन् । सद्भावना भ्रमण एकदिन नै काफी हुनेछ । अझै पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभन्दा आधीउधी तय भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ला ।
यस्तै, विगतमा लामै प्रयत्न गरे पनि मुक्तिनाथ, लुम्बिनी र जनकपुर जान नपाएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ती स्थानको भ्रमण तय गरे सद्भावनामा टेवा पुग्नुका साथै बिगि्रएको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि विश्वास कायम हुन सक्ला ।
प्रधानमन्त्रीको तहमै भ्रमण गर्ने हो भने आफ्ना आन्तरिक समस्याको उचित सम्बोधन गरेर बाहिर कुनै पनि नाममा कुरा नउठ्ने स्थिति पहिले बनाउनुहोस् । त्यसपछि ठूला सवालमा निर्णयात्मक सम्झौता गर्न मात्र जानुहोस् । पञ्चेश्वर कार्यान्वयन, कोशी उच्च बाँध बनाई नेपालसम्म जलमार्ग विस्तार, कणर्ाली चिसापानीको विकास, ठूला पूर्वाधार योजनाहरुको मोडालिटीलाई अन्तिम रुप दिने जस्ता विषय टंुगिऊन् ।
यो पंक्तिकार अझै पनि जोड दिन्छ – फगत राजनीतिक पर्यटनमा हाम्रा प्रधानमन्त्री छिमेक यात्रामा नजाऊन् ।
२०७३ भदौ १३ गते १५:२१ मा प्रकाशित
Posted by arun subedi at 7:58 AM